Slava Potato Group of Companies - Magazin System Magazine
Agriculturallọ ọrụ ugbo Slava Potato pụtara na ahịa Russia na 2001, na mbilite ịrị elu nke ọrụ ugbo n'ozuzu ya, na ụlọ ọrụ na-eto nduku ọkachasị.
E guzobere ugbo a n'ime obodo Komsomolskoye, mpaghara Komsomolsky nke Chuvash Republic. Ọrụ malitere na hectare 35 nke mgbazinye ego. Isi ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ịkụ mkpụrụ nduku na akwụkwọ nri na tebụl. N'oge na-adịghị anya, agrofirm rụpụtara nsonaazụ pụtara ìhè: ugbua na 2008 enyere ya aha "ụlọ ọrụ na-amịpụta poteto kachasị mma nke Chuvash Republic".
Ka ọ na-erule afọ 2009, ụlọ ọrụ ahụ toro n'otu ụlọ ọrụ, nke, na mgbakwunye na isi ụlọ ọrụ, gụnyere Komsomolskie Akwụkwọ nri Agrofirm, Slava Potato-Yalchiki Agrofirm na Slava Potato-Kanash Agrofirm. Ala nke ụlọ ọrụ ahụ dị na mpaghara atọ nke Chuvashia n'otu oge: Komsomolsk, Yalchik na Kanash. Mkpokọta ala ubi niile ruru hectare 5300.
A na-agbakwunye ọka (oge opupu ihe ubi na oge oyi) na nri na-acha akwụkwọ ndụ na ndepụta nke ihe ọkụkụ toro, mana isi ọkachamara nke otu ụlọ ọrụ ahụ bụ ịmị mkpụrụ nduku.
Ihe ọpụrụiche - ịmị mkpụrụ
Na mbu, anyi no na oru ime ihe omumu omumu. Mgbe ahụ ahụmịhe na ihe ọmụma ha nwetara mere ka o kwe omume ịmalite ụzọ maka mmepụta nke poteto mkpụrụ mbụ, nke ghọrọ profaịlụ maka Agrofirm "Slava Potato - Yalchiki".
Na 2015, ndị ọkachamara n'ugbo ahụ zụrụ ma kụọ microplants nduku na minitubers n'ime oghere greenhouses. Nsonaazụ nke nyocha ụlọ nyocha gosipụtara na nnwale ahụ bụ ihe ịga nke ọma: ihe mkpụrụ a nwetara nwetara zutere ihe ndị kachasị elu.
Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, na Disemba 2017, ụlọ ọrụ ahụ mepere ụlọ nyocha nke microclonal nke oge a nwere ikike nke ihe ruru 100 puku microplants kwa afọ wee wuo ụlọ griinụ, nke na-ejigide ọnọdụ kachasị mma maka inweta mkpụrụ mkpụrụ nke ogo siri ike.
Taa Slava Potato otu ụlọ ọrụ bụ otu n'ime ndị isi na mpaghara ahụ gbasara ịmị mkpụrụ nduku. Enterlọ ọrụ ahụ arụpụtala usoro mmepụta zuru oke: Agrofirm "Slava Potato-Yalchiki" na-arụ ọrụ nke ọma iji nweta ihe mkpụrụ mbụ na nke mbụ (microplants, minitubers, ọgbọ ọgbọ 1, nnukwu-oke), mkpụrụ poteto elite (nnukwu ndị ọkachamara) , ndị ọkachamara); Agrofirm "Slava Potato" na-aga n'ihu na -emepụta mmepụta nke mkpụrụ ọmụmụ poteto. N’izugbe, ihe ruru hekta 250 ka enyere ya maka ịkọ mkpụrụ.
Kwa afọ, a na-anwale ihe dịka ụdị poteto iri atọ ọzọ na ule nke ụlọ ọrụ ahụ. A na-anwale mmezu ozuzu maka iguzogide nje, mkpụrụ na ogo azụmahịa. Varietiesdị kachasị mma, nke kwadoro uru ha maka ọtụtụ oge n'usoro, webatara n'ime mmepụta. Companylọ ọrụ ahụ na-elebara anya na ụdị mba ọzọ dị elu (Riviera, Red Scarlett, wdg) na ndị Russia na-ekwe nkwa (Gulliver, Meteor, na site na oge ọhụrụ yana Krasa Meshchera, Flame).
A na-ere mkpụrụ osisi a nwetara n'ugbo nke Slava Potato Group of Companies na Russia niile, yana mba ndị agbata obi ya. Ndị ọkachamara nke otu ụlọ ọrụ na-enye ndị ọrụ nlekọta ndụmọdụ dị elu na nhọrọ nke iche ma soro ndị ahịa kerịta ahụmịhe ha na-eto eto.
Isiokwu nduku na akwụkwọ nri Ruo afọ 15 gara aga, Slava Potato Group bụ otu n'ime ndị na-emepụta poteto na akwụkwọ nri na Middle Volga mpaghara. Atọ nke atọ nke ụlọ ọrụ ahụ na-emepe mmepe nke ntụzịaka a: ụlọ ọrụ nne na nna - Agrofirm "Slava Potato" (poteto na-eto eto), Agrofirm "Slava Potato - Kanash" (poteto na-eto eto) na Agrofirm "Komsomolskie Akwụkwọ nri" (na-eto poteto na akwụkwọ nri) na-emeghe). Na ngụkọta, ugbo ahụ nyere ihe dị ka hekta 500 maka nduku tebụl, na hectare 50 maka akwụkwọ nri.
E kewapụrụ mpaghara ndị ahụ na ibe ha, nke ọ bụla n'ime ha nwere ọrụ nke ngwa ọrụ ugbo kachasị ọhụrụ, akụrụngwa maka ịhazi na ịchekwa poteto. Ọnụnọ nke ebe nchekwa nke oge a (nke nwere ikike 25 zuru ezu) nke nwere sistemu microclimate na ngwa nju oyi na-enye ohere ka otu ụlọ ọrụ nye ndị ahịa ngwaahịa dị elu n'oge afọ kalenda niile.
Tags: "Ebube na nduku"na-eto eto mkpụrụ osisi na tebụl ndukuRepublic nke Chuvashia